1 sano 4 bilood ka hor #911 by RUN974
Bonjour, je suis waji horay u qabsoomay, j'ai en ma haysataa A330 prologue de chez BBS maareynta dhirta dharbaaxo kudhex gareeysiiyo? waa mid aad u xun oo ku salaysan qadarin ku salaysan sida PMDG 777. Merci.
1 sano 4 bilood ka hor #912 by Gh0stRider203
Forumkani waa Ingiriis kaliya. Wixii French Rikooo Forum, raac xiriir this: www.rikoooo.com/fr/forum/
1 sano 4 bilood ka hor #934 by DRCW
Wixii macluumaad ah oo ku saabsan barnaamijka FSX vous utilisez. Si aad ula socoto rikoodhiga, si aad u ogaatid FSX Delux iyo SP1 / SP2 si aad u ogaatid wixii aad u baahantahay. Si kastaba ha ahaatee, si aad uhogasho ah, si aad u roon in aad doorato si aad u doorato, si aad u dooratid in aad ka mid noqotaa adduunka. Faariil moi savoir, merci